The Ab Presents Nepal » दुर्इ हजार वर्ष लगाएर बनाइएको पुरानो भीरमा झुण्डिएको मन्दिर, ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस!
दुर्इ हजार वर्ष लगाएर बनाइएको पुरानो भीरमा झुण्डिएको मन्दिर, ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस!
करीब २ हजार वर्ष लगाएर बनाइएको (ग्रेट वाल) देखेरै थाहा हुन्छ चिनियाँहरु प्रचीन कालदेखि नै मेहनती थिए । चिनियाँ को मेहनतले बनेको एक प्राचीन मन्दिरले संसारलाई चकित पारेको छ । चीनको सान्सी प्रान्तमा रहेको एउटा पाइला राख्ने ठाउँ समेत नभएको भीरमा टाँसेर बनाइएको यो मन्दिर हावामा झुण्डिएको जस्तो देखिन्छ । मन्दिरलाई १५ सय वर्ष पुरानो मानिन्छ । बौद्ध, ताओ र कन्फुसियस धर्ममा आधारित वास्तुकलाको मिश्रणमा बनाइएको यो मन्दिर संसारभरका पर्यटकको आकर्षण बन्दै आएको छ ।
यस मन्दिर क्षेत्रमा ४० भन्दा बढी भवन र मण्डप रहेको छ । थुप्रै प्राकृतिक बाधा, अवरोध झेलेर पनि आजसम्म जस्ताको तस्तै खडा रहेको देखेर यहाँ पुग्ने जो कोही आश्चर्यमा पर्ने गर्छन् ।
विषेश प्रकारको बलियो र लचिलो काठबाट बनाइएकाले यो यति बलियो रहेको जानकारहरु बताउँछन । हालसम्म यसले कयौं शक्तिशाली भूकम्प झेलिसेको छ र भनिन्छ जुनसुकै धर्म मान्ने मानिसको लागि पनि यो आस्थाको धरोहर रहेको छ जहाँ मनले चाहेको पुरा हुने बिश्वास गरिन्छ ।। हेर्नुहोस यो अचम्म र अति दुर्लभ तरिकाबाट निर्माण गरिएको निकै पुरानो मन्दिरकाे फाेटाेफिचर :